DAAWO: Imaaraadka oo lagu helay inuu QARAXYO & KHAARAJIN ka fuliyo gobolka (Daba-gal) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Imaaraadka oo lagu helay inuu QARAXYO & KHAARAJIN ka fuliyo gobolka...
DAAWO: Imaaraadka oo lagu helay inuu QARAXYO & KHAARAJIN ka fuliyo gobolka (Daba-gal)
(New York) 18 Agoosto 2019 – Imaaraadka Carabta oo sanadihii dambe lasoo baxay siyaasad markii hore u qarsanayd oo kharbudaad ah, taasoo inta badan ka dhan ah dalalka deriska ah iyo kuwa gobolka ayay iminka arrin kale kusoo baxday.
Baaritaan ay samaysay Democracy Now oo ah hay’ad wareed madax bannaan oo liberaali ah, inta badanna daba gasha arrimaha ay saamaynta ku leedahay siyaasadda cawaran ee uu Maraykanku ku wajoho umuurihiisa dibedda ayaa baaritaan ay samaysay ku heshay in Imaaraadku uu khaarajiyo siyaasiyiinta ku lidka ah, isagoo weliba adeegsanaya askar Maraykan ah oo howlgab ah.
Aram Roston oo ka tirsan Buzzfeed News ayaa yiri: ”Waxaan ogaanney wax ka duwan wax kasta oo aannu horay u aragnay, taasoo ah in Ciidamada Gaarka ah ee Maraykanka sida Navy Seals ay u shaqeeyaan Ciidamada Imaaraadka ee Yaman si ay u khaarajiyaan siyaasiyiinta diiddan siyaasadda Imaaraadka.”
Ciidamadan Maraykanka ah ee howlgabka ah oo u shaqeeya calooshood u shaqaystayaal ahaan ayaa dadka ay dileen waxaa ka mid ah madaxii Ururka Al Islaax ee Cadan.
Waxaa xitaa baaritaankan lagu helay nimankaa Imaaraadka u ijaaran oo xitaa qarax dhigaya meel dhismaha ururkaasi ee Cadan, iyagoo marka uu qaraxu dhaco goobta gaari kaga baxsanaya.
Imaaraadka iyo Sucuudiga ayaa dagaal daba dheeraaday ka wada Yaman, waloow aysan siyaasad ahaan isku raacsanayn aayaha dalkaasi.
Tusaale ahaan, Sucuudigu wuxuu la dirirsan yahay Xuutiyiinta oo uu u arko gacanta dheer ee Iiraan oo uu xafiiltan kala dhexeeyo, halka Imaaraadku uu cayrsanayo siyaasado kale oo ku dhisan aragti ah inuu gacanta ku wada dhigo dekedaha gobolka, si uu u cuuryaamiyo oo aysan ula tartamin dekedihiisa oo haatan camiran.
Si uu taa u gaaro wuxuu doonayaa inuu marka hore la wareego dekedaha koonfurta Yaman, wuxuuna taa u marayaa inuu laba dal u kala gooyo dalka Yaman oo midaysnaa ilaa 1994-kii.
Arrimahan dhagarta iyo dhabqiska siyaasadeed ah ayuu sidoo kale Imaaraadku ka wadaa Somalia, waloow aysan Somalia haatan ugu sahlanayn sida Yaman sababo badan dartood, waxaa se la tuhmayaa in uu Somalia ka wado arrimo u dhigma kuwa ay ogaatey saxaafadda Maraykanku.
Gobollada Somalia qaarkood ayaa waxaa u jooga ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah, isagoo laaluusha siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood, si ay ugu fuliyaan maslaxooyinkiisa qaran oo ka dhan ah midda Somalia.
Previous articleDAAWO: Madaxwayne Afrikaan ah oo 10 bilood kaddib la arkay isagoo ul ku tukubaya oo ay tillaabtu dhibayso!
Next article”Haweenka ayaa 4 jeer ragga uga badan dirista sawirrada qaawan!” – Daraasad cusub